Igwe ọkụ plasma dị elu | induction igwe na-emepụta igwe | ihe ndozi oku
nnukwu plasma kpo oku
Plasma na-ekpo ekpu
Banyere Plasma na-ekpo ọkụ
A na-akọwa plalasma dị ka ihe na-anọghị na-etinye aka na nke na-adịghị etinye aka na nke na-adịghị mma, nke na-akwụ ụgwọ zuru ezu na efu. Dị ka gas, plasma enweghị nkọwa ọ bụla ọ gwụla ma e tinyere ya n'ime akpa. Iji wepụta plasma, anyị na-etinye ebe eletrik na gas, ya na ihe mgbaru ọsọ nke iwepụ electrons site na orbit ha gburugburu gburugburu. Nke a na-emepụta ngwakọta ions na electrons na-erughị ala, nke na-enye ihe igodo plasma, gụnyere njikwa eletriki ya, ebe magnet, na mmetụta uche na ogwe ngwaọrụ electromagnetic.
Ihe dị mkpa maka ịmepụta ma na-akwado plasma, na-anọgide na-etinye ume. Ntinye bụ ụzọ kachasị mma isi nye ihe ntinye ume na-aga n'ihu maka ọgbọ plasma. Ufodu ngwa ahia ndi ozo maka plasma gunyere:
Nlekọta ọbara (plasma ịgba mkpuchi)
Nyocha na micro-electronic
Iji wepụta plasma, anyị na-etinye ebe eletrik na gas, ya na ihe mgbaru ọsọ nke iwepụ electrons site na orbit ha gburugburu gburugburu. Ndị electrons ndị a na-enye n'efu na-enye ihe igodo ahụ plasma, gụnyere njikwa eletrik ya, ebe magnet, na mmetụta uche na mpụga emepụta ihe ọkụkụ ubi.
Categories Technologies Tags nnukwu plasma kpo oku, plasma mmepụta, plasma mmepụta ihe ọkụkụ, Plasma induction, plasma induction kpo oku, plasma oku redio kpo oku